David Beckham oo ka sheekeeyey kabtii uu ku daqray Sir Alex Ferguson 14 sanno ka dib +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
David Beckham oo ka sheekeeyey kabtii uu ku daqray Sir Alex Ferguson 14 sanno ka dib +SAWIRRO
14 sanno ka dib, David Beckham ayaa dib u furay oo ka sheekeeyey markii uu kabta ku daqray tababarihiisii hore ee kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson.
Xiddigii hore ee kooxda Manchester United ayaa wuxuu u baahday in dhowr qodob laga tolo sannadkii 2003dii ka dib markii uu kab ku daqray tababare Sir Alex Ferguson.
Fergie ayaa si aan caadi aheyn u carooday ka dib markii ay kooxdiisa Man Utd guuldarro kala kulantay Arsenal, taasoo keentay inuu ciyaartoyda oo dhan kula qeyliyo qolka lebiska, sidoo kalena uu si gaar ah ula dagaalay Backs oo si xun u ciyaaray kulankaas. Balse kabtankii hore ee xulka England Beckham ayaa sheegay inuu haatan arrintaas u arko mid maad leh.
David Beckham oo shilkaas xasuusanaya ayaa saxaafadda u sheegay: “13 sanno oo dahabi ah ayaan isla soo qaadanay Sir Alex Ferguson.
“Habeennada aan ciyaareyno Champions League tababaraha gaar ayey u ahaan jireen, wuxuuna marwalba soo geli jiray garoonka. Xerada tababarkana wuxuu inoogu sharrixi jiray qaabka rigoorada loo gamo iyo laadadka xorta ah, sidoo kalena wuxuu ciyaartoyda uga sheekeyn jiray sida uu u ahaa xiddig heer sarre ah waayihiisii kubadda cagta.
“Markii aan sii yaqiinsaday inuu Fergie yahay shaqsi aad u weyn waxay aheyd ka dib kulankii Arsenal ee 2003dii. Dhowr qalad ayaan kulankaas sameeyey, qolka lebiska ayuu yimid, dhowr eray ayaana isdhaafsanay.
“Balse socod ayuu igu dhaafay, isagoo careysan ayuu jaakaddiisa dhulka ku tuuray. Ka dibna kobta ayuu lasoo baxay, wajiga ayuuna iiga dhuftay, markaas ayaan yaqiinsaday inuu tallaabada saxda ah qaaday. Hadda waxaan u arkaa falkaas mid maad leh oo keliya”.
Ferguson ayaa buug uu qoray ka hadlaya waayihiisii tababarenimo ee kubadda cagta sannadkii 2013kii, wuxuu ku caddeeyey inuu David Beckham isku deyey inuu la dagaalo balse ay ciyaartoyda Man Utd ka qabteen.